မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၃၁၁) (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၈ တောတွင်းပြန်ရခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းကိုကျောခိုင်းခြင်းလော (၁) ဤသမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံကို အမျိုးမျိုးအနက်ဖွင့် ထင်ကြေးပေး ပြောဆိုလာခဲ့ကြသည်မှာ ၅၂ နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီ။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ပျက်သွားပြီးနောက် ဗကပ (ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တောတွင်းသို့ ပြန် သွားကြသောပုံပါ။ စစ်အစိုးရကဖြန့်သောပုံမို့ ပထမတော့ သူတို့ပြန်ကြပြီဟု၊ နောက်တော့ ပြည်သူများကို ကျောခိုင်းပြီဟု တစတစနှင့်ငြိမ်းချမ်း ရေးကို ကျောခိုင်းသွားပြီဟု ပုံစာရေးသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ တောတွင်းက ဗကပ စေ့စပ်ဆွေးနွေး၍ မရသည့်အဆုံး တော တွင်းပြန်ကြခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျောခိုင်းခြင်းမည်သလော။ (၂) စစ်မှန်သော ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ်လိုလားသည်ဆိုပါက မျက်နှာစုံညီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေဖို့ ဗကပနှင့်...
ကျော်နိုင် ● အတုခိုး မမှားကြစေလို (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ကျွန်တော်တို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ၁၉၈၀ နှစ်များက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုပ်မြင်သံကြားစတင်ထုတ်လွင့်ခြင်းနှင့်အတူ television နှင့် video player များ စတင်ခေတ်စားလာသည်။ ထိုစဉ်က television ကို အပေါ်စက်၊ video player ကို အောက်စက်ဟု ခေါ်ကြသည်။ Video player များပေါ်လာသည်နှင့်အညီ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများကို အလွယ်တကူ ကြည့်လာနိုင်ကြသည်။ ထိုအခါ အဆိုပါရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများထဲမှ သရုပ်ဆောင်များ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံနှင့် လူနေမှုစရိုက် တို့ကို ကျွန်တော်တို့ အတုခိုးမှားမည်စိုးသဖြင့် မိဘများက သတိပေးဆုံးမခဲ့ကြသည်။...
မောင်လူပေ ● ကမ္ဘာ့ငွေ၊ မြန်မာ့ငွေ…. ဘယ်သူတွေစိုးမိုးထား (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ တစ်နှစ်လုံးမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေ ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့တဲ့ ငွေအားလုံးရဲ့ ၈၂%ကို ထိုလူတွေထဲက အချမ်းသာဆုံးသော တစ်ရာခိုင်နှုန်းက ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Oxfam International အဖွဲ့ကြီးကဆိုတယ်။ သူတို့အဆိုအရ ဝင်ငွေတစ်ဆယ်ရှိရင် ရှစ်ကျပ်ဟာ ၁%ကရပြီး ကျန်တဲ့နှစ်ကျပ်ကသာ ၉၉% ကရတဲ့သဘောပေါ့။ ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ ၅၀%ကလည်း စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမရှိပဲ အရင်အတိုင်းဆင်းရဲမြဲပါပဲ။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးက ချမ်းသာသူတွေကိုသာ မျက်နှာသာပေးပြီး သာမန်အလုပ်သမားတွေအတွက် ဘာမှမတိုးတက်စေခဲ့ပါ။ ကုဋေကြွယ်သူဌေးတွေ တိုးလာတာဟာ စီးပွားရေးတွေတိုးတက်လာတာမဟုတ်ပဲ စီးပွားရေးနည်းလမ်းတွေ...
ဌေးမင်းခိုင် ● Consequential Law and Fundamental Law (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ဆယ်တန်းရူပဗေဒမှာ မေးခွန်းတမျိုးပါပါတယ်။ concept တွေ Law တွေဟာ အခြေခံကျလား (fundamental law ဟုတ် လား) ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ဥပမာ Ohm’s law ဟာ fundamental...
သန်းမြင့်ဦး ● ထို ရက်သတ္တပတ် (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၈ သူ့ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၇၁ နှစ်က ယခုကဲ့သို့ ရက်သတ္တပတ်တွင် ဖြစ်၏။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အတွင်း ဗြိတိသျှအစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးချုပ် ကလဲမင့် အက်တလီနှင့် ဦးအောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သော...
ကာတွန်း အောင်မော် ● မကြော်ရဲလို့ပါ … (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁ No tags for this post.
ကိုအောင်မှိုင်း ● အတွေးအခေါ်ဟောင်းဖြင့် တိုင်းပြည်သစ်တည်ထောင်ခြင်း (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၈ မည်သူသည် ကျနော်တို့၏ ရန်သူနည်း။ မည်သူသည် ကျနော်တို့၏ မိတ်ဆွေနည်း။ ဤပြဿနာသည် တော်လှန်ရေးအ တွက် အရေးအကြီးဆုံးပြဿနာဖြစ်သည်။ အတိတ်က တရုတ်ပြည်တွင်ဆင်နွဲခဲ့သော တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲများ အောင်မြင်မှု အလွန်နည်းပါးခဲ့ရသည့် အခြေခံအကြောင်းရင်းမှာ ရန်သူအစစ်ကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် မိတ်ဆွေစစ်များနှင့် စည်းလုံးအောင်မလုပ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ...
ကာတွန်း ညီပုချေ ● တက်သွားပြီဟေ့ … (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ
တင်လတ်ကို – တို့နှစ်ယောက်နေ့တွေ
KT# တို့နှစ်ယောက်နေ့တွေ တင်လတ်ကို (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၃၊၂၀၁၈ မီးတွေလောင် ငလျင်တွေလှုပ် ရေတွေ အကြိမ်ကြိမ်ကြီးနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ မင်းနဲ့ငါ လက်ချင်းချိတ်နိုင်ခဲ့တာနည်းတဲ့ကုသိုလ်လားကွာ။ ကျောချင်းကပ် တရွက်တည်း တဘ၀တည်းမရည်ရွယ်ခဲ့ရာ မနိုင်တာစာရင်းတို့ထား ဗျာလည်းမများဘူးအချစ်ရယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဘာမဆိုအတုတွေထွက်လာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာတုပမရတာသိလိမ့် ရခဲ့ရင်လည်း ရယ်နေရမှာပါပဲ။ တို့နှစ်ယောက်နေ့တွေမှာ မျက်နှာဖုံးမရှိ ကြိုးနီမရှိ ပဒေသရာဇ်စနစ်မရှိ ဒါကြောင့်နောင်တဆိုတာအဝေးကြီး။ တို့နှစ်ယောက်နေ့တွေမှာ အိပ်မက်ရှိ...
ဗိုလ်သူရိန် ● ဆိုမာလီ ပင်လယ်ဓါးမြနှင့် သင်္ဘောသား (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၇၈ တွင် ကျင်းပခဲ့သော World Maritime Day မှာ သင်္ဘောသားတို့အား လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းအချက် ၇ ချက်ထဲက တချက်ဖြစ်တဲ့ Seafarers risk their lives ပင်လယ်ဓါးမြတို့...
ကိုသန်းလွင် ● ဘေဂျင်းမြို့တော်နှင့် လေထုသန့်ရှင်းရေး (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈ (၁) ယမန်နှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ပိုင်းက ကျွန်တော်စီးလာခဲ့သော လေယာဉ်ပျံသည် ဘေဂျင်းလေဆိပ်သို့ ဆင်းခါနီးတွင် ကျွန် တော်ယူလာနေကျ N95 မျက်နှာဖုံးသည် မေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်သည်။ ဘေဂျင်း၏ညစ်ညမ်းသောလေထု တွင်မျက်နှာဖုံးမပါဘဲ လျှောက်သွားရန် မသင့်လျော်ပါ။ ကျွန်တော်သည် မျက်နှာဖုံးမပါရခြင်းအတွက် ရုတ်တရက် နောင်တရ သွားမိပါသည်။...
ကာတွန်း OKKW – မလိုသေးရင် အသာနေ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း OKKW
စောငို ၂၀၁၃ တုန်းက ဆွဲတဲ့ ကာတွန်းပါ။ အခုမှ ဆွဲထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားစူးပါရစေရဲ့ (အယ်ဒီတာ) မောင်ဥက္ကလာ – ဥာဏ်ကြီးရှင်များနဲ့ တဒင်္ဂ (ဝါ) လင်းတလောက်တော့ ငှက်တိုင်းလှ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ဒီရက်အတွင်း ဖမ်းတယ်ဆီးတယ်၊ ပစ်တယ်ခတ်တယ်၊ သတ်တယ်ဖြတ်တယ်၊ လှုပ်တယ်ခါတယ်စတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် အလိုလိုနေရင် ကြောက်စိတ်ပိုနေတဲ့...
Than Htay Maung ချမ်းမြ – “နိုင်ငံတော် သီချင်းဆိုပြီးရင် ငါတို့ အမှိုက်ကောက်ရမှာ အသေချာပဲ သူငယ်ချင်း” (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးတာ နဲ့ Seminary ကွင်းကို မညီမညာ ငါတို့သွားကြတယ် တချို့က မုန့်ဈေးတန်းက လာတယ် တချို့က ရှူးပေါက်ကနေ လာတယ် တချို့က...
လင်းသက်ငြိမ် ● အိမ်စာ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၈ ကိုယ်ထိုင်နေတဲ့အကိုင်းကိုမှ ခုတ်ခုတ်ချနေရတဲ့ ခေတ်ပဲ သဒ္ဓါတရားကို အသံထွက်ကြော်ငြာဖို့ အလှူခံမဏ္ဍပ်ရှိနေခဲ့ပြီ သောက်သုံးဟာ မကျဘူး တင်နေတယ် သစ်ပင်ခွဆုံပေါ်က သစ်ကိုင်းခြောက်တခုလို တင်နေတယ် ငွေနံ့ရရင် ငါ့အမြီးက နှံ့လာသလားပဲ ခွေးစိတ်ပေါက်ရတာ အဆင်ပြေမယ့် ကမ္ဘာလား ခက်တဲ့အကြောင်းက ရိုးအီနေတဲ့ လှည်းဝင်ရိုးသံပဲ ကလီရှေးနဲ့...
အယ်ကော် ● တိမ်မည်းညိုကို ချွေတဲ့လေ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၈ ငပြဲဝယ်တဲ့ဆန်ဖိုးက နို့ဆီသုံးလုံးစာပဲ။ ထွန်းမင်းက ငါးလုံးထည့်ပေးတယ်။ ဒါကိုထွန်းမင်း မိန်းမကမျက်စောင်းထိုးပြီး ကြည့် ပစ်လိုက်တယ်။ “ဘာလို့ပေးရတာလဲဆိုတဲ့သဘော” “ဟဲ့ကောင်၊ ငပြဲဆားနည်းနည်း၊ ငပိနည်းနည်းပါယူသွား”လို့ ထွန်းမင်းပြောလိုက်တာကြောင့် ထွန်းမင်းမိန်းမ အေးအေးမူ ဆီ က မျက်စောင်းမဟုတ်တော့ဘဲ အသံထွက်လာတယ်။ “ဘုရားဖြစ်မယ့် အုတ်နီခဲကြီး၊...
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၃၁ဝ) (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၂၊ ၂ဝ၁၈ စာရေးဆရာဇော်ဂျီမှာ စာဖတ်တပည့်ရယ်လို့ မရှိ (၁) ဆရာဇော်ဂျီ အဲဒီလိုပြောဖူးခဲ့တာကို ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်သလို ကျနော့်တသက် ကလောင်ကိုင်နေသေးသမျှ အဖိုးတန် အသုံးတည့်နေဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ်လို့ ဆရာဇော်ဂျီထံ ပထမဆုံးအကြိမ် သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ် ကြုံခဲ့ရပုံအတိုင်းဆို ဘာ စာပေအမွေမှ ရလိုက်နိုင်ဖွယ်မရှိ။ ၁၉၅၆-၅၇...
ကိုဂျေ ● ဆရာမောင်သော်က ပြောသောပုံပြင်များ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈ ● ဆင်ထိန်းမောင်စိန် ဆရာမောင်သော်ကရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟောပြောချက်တွေထဲမှာ ဆင်ထိန်းမောင်စိန်အကြောင်းကို ကျွန်တော် အမြဲလုို သတိရနေတတ်ပါတယ်။ မောင်စိန်ဟာ ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ရုံက ဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲမှာ ဆင်ချေးကျုံးရတဲ့ ဆင်ထိန်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ပဲ နေ့စဉ် ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့...
မောင်ရစ် – မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတဲ့ အိုဘားမားနဲ့ စကားလက်ဆုံ မှတ်သားမိသမျှ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ Netflix အင်တာနက်စတေရှင်က အွန်လိုင်းတီဗီအစီအစဉ်လုပ်ပါတယ်။ My Next Guest needs no introduction with David Letterman ဖြစ်ပါတယ်။ David Letterman ဆိုတာက အနားယူသွားတဲ့ တီဗီအစီအစဉ် အင်တာဗျူးသူပါ။...
ညိုထက်ညို ● လောကဓာတ်နဲ့ ခဏတာ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈ အဲဒီနေ့ နေ့လယ် တစ်ချက်ခွဲလောက်မှာ ကျွန်တော် အေးချမ်းသာယာလမ်းကို ရောက်တယ်။ ခြံဝကနေ ကားဟွန်းကို တီး လိုက်တော့ ခြံထဲက ကရင်မလေးထွက်လာပြီး ပိတ်ထားတဲ့ သံတံခါးကြီး အလယ်နားက သုံးပေပတ်လည်လောက် ရှိတဲ့ အပေါက်လေး ပွင့်လာတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော့်ကားကို...
မြတ်လှိုင်း ● နေ့တနေ့ ကျရှုံးခြင်း (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈ အတ္တတွေကို ဒေါသနဲ့အပိုင်းပုိင်းခုတ်ဖြတ် ဒေါသနဲ့အပြိုင်းအရိုင်း ပြန်ရှင်သန်လာကြ အတ္တတွေ။ ငါရှို့ပစ်လိုက်တဲ့မီးတောက်ထဲ တန်စာခံတွေက အချစ်လို့အော်ပြီး သေသွားကြ မနက်ဖြန်က ပြာတွေလိုလွင့်သွား၊ ပေါက်ကွဲပြတဲ့ မီးတောင်သေက ပြန်နိုးထလာ မြို့တမြို့ကိုဝါးမြိုလိုက်၊ ပြန်အန်ချလိုက် ငါကအတိတ်ဝင်စားကောင်၊ အပြုံးတဝက် အမုန်းတခြမ်းနဲ့ဂြိုလ်သား၊ လူ့အခွင့်အရေးကို ဟားတိုက်...
မောင်လူပေ- ဗဟိုအစိုးရ ရပ်ဆိုင်းခြင်း(Government shutdown) (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈အခုတလော အမေရိကားသတင်းတွေမှာ ကြားနေရမဲ့စကားလုံးကတော့ Government shutdown ဆိုတာပဲ။ ဗဟိုအစိုးရရပ်ဆိုင်းခြင်းလို့ ဘာသာပြန်ရမယ်ထင်ရဲ့။ ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ သမ္မတသက်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ တကယ်ဖြစ်သွားလေတော့ အမှတ်တရနှစ်ပတ်လည်ပေါ့လေ။ အရင်သမ္မတတွေဖြစ်တဲ့ ဘွတ်ရ်ှတို့ အိုဘားမားတို့ခေတ်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာမှာ၊ (၁၆)ရက်ကြာတယ်။ ဗဟိုအစိုးရ(federal government)ရဲ့...
ဆောင်းယွန်းလ ● ပျော်မယ်ထင်လို့ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈ ပျော်မယ်ထင်လို့အနှစ်နှစ်ဆယ်ကို ကျော်ပစ်ခဲ့လိုက်တယ် မပျော်ခဲ့ပါဘူး ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့နေ့မှာ အကောင်းစားနာရီပတ်ထားလည်း အချိန်တွေက ကုန်ခဲခဲ့တယ် အလွဲတွေနဲ့ လွဲအောင် နောက်ထပ်အနှစ်နှစ်ဆယ်ကို ကျော်ပစ်ခဲ့လိုက်တယ် တေ့လွဲ အတည့်လွဲတွေနဲ့ပဲ မပျော်ခဲ့ပါဘူး ပျော်မယ်ထင်လို့ သတင်းတွေကို ကျော်ဖတ်ပစ်ခဲ့တယ် မပျော်ခဲ့ပါဘူး ဒီနေရာမှာ အရင်ကအတိုင်း...
အောင်သန်းမြင့် ● ပညာရေး (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ PISA (Programme for International Student Assessment) လို့ခေါ်တဲ့ ၁၅ နှစ်အရွယ် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်တဲ့ ၂၀၁၅-ခုနှစ် စစ်တမ်းအရ စင်္ကာပူက ထိပ်ဆုံးမှာရှိပါတယ်။ သူ့နောက်မှာ ဂျပန်၊ ဟောင်ကောင်၊ ကိုးရီ ယား၊ ထိုင်ဝမ်၊...
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း – သတ်ပုံမှားလို့တဲ့ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ No tags for this post.
ကျော်ကျော် (မြရည်စမ်း) ● မြရည်​စမ်းစာ​ပေ ပိတ်​သွားပြီးသည့်​​နောက်​ပိုင်း (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ နှစ်​ကာလ ကြာမြင့်​စွာ ကြိုးစားရပ်​တည်​ခဲ့​သော်​လည်း အ​ခြေအ​နေအမျိုးမျိုးအရ ​ရှေ့ဆက်​သွားရန်​မဖြစ်​နိုင်​​တော့သဖြင့်​ စာအုပ်​​ကောင်းများ ဝယ်​ယူလိုကြပါလျှင်​ အချိန်​မီလာ​ရောက်​နိုင်​ကြရန်​အတွက်​ လိပ်​စာ​လေးပါထည့်​​ပေးထား​သော သတင်းတစ်​ပုဒ်​ကို စိတ်​မ​ကောင်းစွာဖြင့်​ ဖတ်​ရသည်​။ စာအုပ်​အငှားဆိုင်​​လေးတဆိုင်​ပိတ်​​တော့မည့်​ သတင်းဖြစ်​သည်​။ ကျ​နော်​တို့ငယ်​ရွယ်​စဉ်​က ယခု​နေအခါလို ​ဖြေ​ဖျော်​​ရေးပစ္စည်းပစ္စယများ မ​ပေါများလှ။ အချိန်​သည်​လည်း ယခု​နေအခါလို...
ကာတွန်း kzzh ● အောင်မြင်တယ်လေ … (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - KZZH
မြင့်ကျော် ● သတင်းမီဒီယာတွေ သြဇာရှိဖို့ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ ဒီနေ့ညနေ ရုံးကအပြန် သတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်လေး (ဖိုးသောကြာ ခေတ်+မိုး) ဆီ ဝင်ဖြစ်တယ်၊ မ ရောက်တာ ၁ လ၊ ၂ လလောက်ရှိနေတော့ ဘဘကျန်းမာရေးလည်းမေးရင်း တွေ့ချင်တာနဲ့ ကောင်စီဥက္ကဌ ဆီဝင်ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုမျိုးသာထက်ရောက်ပြီး...
ကာတွန်း မင်းထက်လူ ● လေထဲမှာဟေ့ … လေထဲမှာ
ကာတွန်း မင်းထက်လူ ● လေထဲမှာဟေ့ … လေထဲမှာ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း မင်းထက်လူ
စိုးရာဇာထွန်း ● ပဋိပက္ခအလွန် ယ‌နေ့မိတ္ထီလာ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈ ပဋိပက္ခဒေသဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိတ္ထီလာဟာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နီးပါး ‌အေးချမ်း‌နေပါပြီ။ ကုန်‌‌ရောင်းကုန်သွယ်မှု‌တွေ ပုံမှန်လည်ပတ်၊ မူစလင်ဆိုင်၊ ဗမာဆိုင် မခွဲခြားဘဲ ‌ဈေး‌ရောင်း၊ ‌ဈေးဝယ်၊ သွားလာလှုပ်ရှား‌‌နေကြပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲ‌နေသူ‌တွေ၊ ‌ဘောလုံးကန်‌‌နေကြသူ‌တွေ၊ နာမည်ကျော် မိတ္ထီလာကန်‌‌ဘောင်‌‌ပေါ် လမ်း‌လျှောက်‌‌နေကြသူတွေကို ‌တွေ့ရပါတယ်။ အ‌ခြေအ‌နေ‌တွေ တည်ငြိမ်လာဖို့ မိတ္ထီလာမှာရှိတဲ့...
Page 1 of 87312345...873»
ဌေးမင်းခိုင် ● Consequential Law and Fundamental Law https://t.co/fg06inzjp7 https://t.co/aYV6MuhcPS about 20 hours ago ReplyRetweetFavorite